नेपालमा नेपाल मण्डल सम्भव छ ? - Jhilko
नेपालमा नेपाल मण्डल सम्भव छ ?
हिजोआज सबैभन्दा चर्चाको शिखरमा रहेको प्रदेश ३ नम्बर हो । यो यत्तिकै चर्चा रहेको भने पक्कै होइन । एक त यो केन्द्रीय राजधानी भएको प्रदेश हो । अर्काे, यो यहाँका रैथाने जाति सधैं सत्ता र सरकारको विरुद्धमा लाग्ने भएकै कारणले पनि यो वा त्यो वहानाको विषय पर्छ ।
संघीय राजधानी भएको प्रदेश नम्बर ३ आँफैमा चर्चा हुने खालको यस माने पनि छ कि करिब दुईसय देश भएको विश्वमा एउटै राजधानीमा सात वटा विश्वसम्पदा सूचिकृत छन् । र, आजभन्दा तीन सय वर्ष अघि विश्वमा रहेका शहरीकरणको सभ्यतामा मेसोपोटामिया, पर्सिया, ग्रिस, इजिप्ट, माया, गंगा, चिनियाँहरुकै दाँजोमा काठमाडौं र वरपरको सभ्यता (नेपालमण्डल)बाट परिचित थियो । पूर्वी मुलुकमा यसलाई नेपोर सभ्यता पनि भनिन्थ्यो । वास्तवमा यो नेपालमण्डलमा रहेका नेवाः जाति र नेवाः जातिसँगै सम्मिलित भएर बसेका सँे जाति (भोटे, तामाङ)को आदि थलो हो ।
यसै सेरोफेरोमा रहेर अहिले प्रदेश नम्बर ३ को नाम कस्तो दिँदा उपयुक्त हुन्छ, जातीय पहिचानलाई आधार मान्ने कि सामथ्र्यकै आधारमा नेपालमा संघीयता स्थापित भइसकेकाले जातीय पहिचान होइन, सामथ्र्यकै आधारमा नाम राख्ने भन्ने विषयले मूर्तिकृत हुँदैछ । प्रदेश नम्बर ३ मा जातीय हिसाबले नेवार (नेपालभाषा बोल्ने) १७ प्रतिशत र तामाङ भाषा बोल्ने २२ प्रतिशत रहेको र अन्य भाषा बोल्ने बुहसंख्या नभएकाले नेवाः ताम्सालिङ राख्नुपर्छ भन्ने आवाज पूर्व माओवादी र संघीय समाजवादी पार्टीका आदिवासी र गैरआदिवासीहरुले उठाउँदै आएका छन् भने एकथरि नेवाः सभासदहरुले नेपाल मण्डल ऐतिहासिक कालखण्डमा लिच्छवी र मल्ल राजाहरुले चलाइसकेकाले उपयुक्त हुने तर्क पेश गरेका छन् । यी दुईवटै तर्क नेकपामा सांसदहरुले दिने गरेका छन् भने विशुद्ध क्षत्रीय पहिचानमा पनि यही पार्टीका सासंदहरुले लबिङ शुरु गरेका छन् ।
नेपाल देशको राजधानी रहेको प्रदेशको नाम नेपालमण्डल राख्नु हुँदैन । यसले अन्यौलता सिर्जना गर्दछ, संघीयताका मर्म अनुसार हुँदैन । प्रकारान्तरले नेपालमण्डल मात्रै नेपाल हुन्छ र अन्य क्षेत्र (छवटै प्रदेश)लाई भारत लगायत छिमेकी देशले टुक्र्याएर खान्छ भन्ने दृष्टिकोण सार्वजनिक भएको छ । नेपालमण्डल पक्षीय समूहले इतिहासका सबै तर्क र ऐतिहासिक दस्तावेजलाई हतियारको रुपमा पेस गरिसकेको अवस्थामा त्यतातिर दिमाग घोल्याउनु उपयुक्त छैन ।
नेपालमा नेपालमण्डल वा नेवाः ताम्सालिङ जुनसुकै हालतमा उपयुक्त हुन्छ । दुवैले यहाँका आदिवासी जनजातिलाई एकसूत्रीय मालामा सजाउने काम गर्न सक्छ । नेपालमण्डल कुनै पनि मामिलामा अशोभनीय र खतराको सूचक होइन ।
नेपालमण्डलको बारेमा फरक कोणबाट भूमिका लेखिरहँदा विश्वमा प्रचलनमा रहेका केही देशहरुका नामहरुलाई हामीले सामान्य ज्ञान पढ्दा, लोकसेवाको तयारी गर्दा यी र यस्ता मिल्दाजुल्दा थुपै्र नामहरु कण्ठै गर्ने गरेका छौं । विश्व उदाहरण दिनुभन्दा अघि नेपालसँग सामिप्य भएका नामहरु जस्तो कि नेपालटार, नेपालथोक र नेपालगञ्ज आदि नेपालसँगै जोडिएको नामहरु हुन् । यी नामहरुले देशको नामलाई अवमूल्यन गरेको छैन, झन् नेपाललाई प्रगाढ बनाएको छ । यस्तो परिप्रेक्षमा विगतमा यही प्रदेशभित्र पर्ने सबै जिल्ला समेटिएको नेपालमण्डल उपयुक्त देखिन्छ नै ।
जातीय पहिचानलाई यसले प्रतिनिधित्व नगरे पनि ऐतिहासिक, सांस्कृतिक र सभ्यतालाई मुखरित गर्ने काम पक्कै गर्छ । करिब तीनचार दर्जन जति देशहरुमा देशको नाम र राजधानीका नामहरु उस्तै उस्तै छन् । देश र राजधानीको नाम मात्रै होइन दुई फरक फरक देशहरुमा पनि एउटै प्रकारको नामहरु प्रशस्तै उदाहरण रहेका छन् ।
विश्वमा केही यस्ता देशहरु छन्, जसको उच्चारण र हिज्जे नमिलेपछि कुन देश जनाउन खोजेको थाहा हुँदैन । विकसित देश सिंगापुरको राजधानीलाई पनि सिंगापुर नै भनिन्छ । जिवुटी देशको राजधानीलाई जिबुटी नै, सान मारिनोको सान मारिनो नै । लग्जेम्बर्गको लग्जेम्बर्ग र मोनाको देशको राजधानी मोनाको नै । संसारको सानो र भूपरिवेष्टित देश भ्याटिकन सिटीको भ्याटिकन सिटी नै । ग्वाटेमालाको राजधानी पनि ग्वाटेमाला सिटी । गिन्नी बिसाउको राजधानी बिसाउ हो ।
यस्तै युरोपेली देश अष्ट्रिया र सबैभन्दा सानो महादेश अष्ट्रेलियालाई हेरौं । अफ्रिकी देशहरु नाइजर र नाइजरिया चिनौं । अफ्रिकी देश माली र माल्दिभ्सको राजधानी माले झण्डैझण्डै मिल्न आउँछ । मेक्सिकोको राजधानीलाई मेक्सिको सिटी, कुवेटको राजधानीलाई कुवेट सिटी, अण्डोरा देशको राजधानी अण्डोरा ला भिल्ला र पानामाको राजधानी पानामा सिटी हो । त्यस्तै अल्जेरियाको अल्जियर्स, ब्राजिलको ब्राजिलिया, टुय्निसियाको टुय्निस हो ।
संयुक्त राज्य अमेरिकाको एउटा प्रदेश र युरोपेली देशका नाम केही मिल्दोजुल्दो छ । जस्तो कि जर्जिया । जर्जिया अमेरिकामा पनि छ र जर्जिया युरोपमा पनि । माथि नै उल्लेख गरिएको स्वतन्त्र युरोपेली देश लक्जेम्बर्गको राजधानी लक्जेम्बर्ग नै हो भने छिमेकी देश बेल्जियमको दक्षिण क्षेत्रको एक प्रान्तको नाम पनि लक्जेम्बर्ग पनि छ । स्वतन्त्र देश लक्जेम्बर्गभन्दा पनि बेल्जियमको लक्जेम्बर्ग डेढ गुनाभन्दा ठूलो छ ।
पहिचानको कुरा गर्दा जनसांख्यिक, ऐतिहासिकता, भाषिक, जातिगत र क्षेत्रगतलाई आधार मान्ने हो भने हाम्रै छिमेकी देशहरु भारत र पाकिस्तानमा थप्रै मिल्दाजुल्दा क्षेत्र र प्रदेशहरु रहेका छन् । जस्तो कि भारतमा भएका जम्मु कास्मिर, पाकिस्तानमा पनि कास्मिर रहेको छ । भारतमा पञ्जाब प्रान्त रहे जस्तै पाकिस्तानमा पनि पञ्जाब प्रान्त छ ।
वीरगञ्जको तेल उद्योगमा भीषण आगलागी, नियन्त्रणको प्रयास जारी
दक्षिण एसियामा अमेरिकाको रणनीतिक प्रवेशप्रति श्रीलंका असहमत
राष्ट्रिय पुरुष फुटबल टोलीको घोषणा
नेपाली राष्ट्रिय टोलीका मुख्य प्रशिक्षक योहान कालिनले विराज महर्जनको कप्तानीमा २३...
खुलाञ्चमा बनाउन लागिएको ढलान सांसदले भत्काए
सांसद भिमसेनदास प्रधान, उपमेयर हरिप्रभा खड्गीलगायतले काठमाण्डौमा खुला स्थान मास्ने...
‘अमेरिका फस्ट’ एजेन्डा बोकेर राष्ट्रपति बनेका डोनाल्ड ट्रम्पले चीनसँग चालेको व्यापार...